ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အဆင့်မြင့်ဇိမ်ခံ၏ယုဂျပုဂ္ဂလိကပျံသန်းနေသည်. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်များ၏အတွင်းပိုင်းကဲ့သို့လှပသောဘာမှမရှိဘူး. ဒါဟာအများဆုံးဇိမ်ခံအိမ်များနှင့်ရွက်လှေအတွင်းပိုင်းထက်ပိုပြီးအံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးကအလွန်အမင်းဇိမ်ခံအခန်းသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ခရီးကိုတက်မြိန်လိမ့်မည်.
ငွေရတတ်သောသူနှင့်ကျော်ကြားသောယင်ကောင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်. ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကြီးတွေ, နိုင်ငံရေးသမားတွေ, နှင့်ထိပ်တန်းစီးပွားရေးအမှုဆောင်အရာရှိလေကြောင်းလိုင်းခရီးသွားမှအလင်းဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားဝန်ဆောင်မှုပိုနှစ်သက်. သငျသညျအသက်တာ၏ဒဏ်ငွေအမှုအရာချစ်ကြလျှင်, သငျသညျပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ခရီးသွားလာမှုခစျြလိမျ့မညျ.
ပုဂ္ဂလိကပျံသန်းဇိမ်ခံဖြစ်ပါသည်. Light ကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားဝန်ဆောင်မှုတိုင်းစိတ်ကူးဇိမ်ခံဖြင့်သင်တို့ကိုမပူဇော်ပါလိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏ဝန်ဆောင်မှုမှာတစျခုလုံးကိုသင်္ဘောသားများပါလိမ့်မယ်. သင်ကအကောင်းဆုံးအစားအသောက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်.
အားလုံးထိပ်အမှုဆောင်အရာရှိပုဂ္ဂလိကပျံသန်းကြသည်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. သူတို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းနေဖို့လိုခငျြသောကွောငျ့ခရီးသွားလာစဉ်က. သင် Entry-level ကိုဂျက်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဂျက်လေယာဉ်ပျံကြသည်ပင်လျှင်တစ်ဦးလေကြောင်းလိုင်းအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဖွစျနိုငျ. သင်တစ်ဦးလေကြောင်းလိုင်းသုံးတဲ့အခါသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်လျှို့ဝှက်မရှိခြင်းအရေးကွီးသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုခံယူဖို့မသင်စေမည်.
သင်တစ်ဦးက 13 နာရီကြာပျံသန်းနေစဉ်အတွင်းပျင်းရိထိုင်ဖို့ဇိမ်ခံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, သငျသညျအလငျးကိုဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်. ဒီကအခြားရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ, သင်အထွတ်အထိပ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပျကွောငျးအရာခပ်သိမ်းတို. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်၏ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းနှင့်ဣနြေ္ဒပတ်ဝန်းကျင်က၎င်း၏အကြီးမြတ်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, တကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့သည်ဖောက်မျက်စိမပါဘဲဖုန်းခေါ်အလုပ်လုပ်နှင့်လုပ်နိုင်စွမ်းအလွန်ကြီးစွာသောပေါင်းသည်.
When you reserve an entire plane for yourself, သငျသညျထိပ်တန်းထစ်ဇိမ်ခံထက်ပိုရ. သင်တို့သည်လည်းမတူနိုင်တဲ့အဆင်ပြေစေရန်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပျော်မွေ့လိမ့်မည်. သင်သည်တာရှည်စီတန်းသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုသည်းခံမည်မဟုတ်. အလွန်အလင်းဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ, သငျသညျအရာခပ်သိမ်း၏တာဝန်ခံ၌ရှိကြ၏. လေယာဉ်ကိုထွက်သွားသင့်တယ်သောအခါကဆင်းသက်သင့်ပါရှိရာအရပ်၌သင်တို့ dictate. သင့်ရဲ့ microjet လေယာဉ်စင်းလုံးငှားဝန်ဆောင်မှုယခုဘွတ်ကင်လုပ်ရန်! လာမည့်အဆင့်သင့်ရဲ့လေကြောင်းခရီးသွားအတွေ့အကြုံယူ.
က Ultra ကိုးကား
Hawker 400 XP ကို
ကို PhenomII 100 (VLJ)
နေလကြတ်ခြင်း 500 (VLJ)